प्रचण्डको व्यंग्य : जनयुद्धको नाम सुन्‍नै नचाहने ओलीले अहिले कालीबहादुर खाम खोई अरे - ९ माघ २०७७, NepalTimes
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री बनेको यतिका वर्षसम्म ओलीले घाइते र योद्धाका समस्याको सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले गुनासो गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘घाइते अपाङ्गहरु माइतीघर मण्डलामा अनशन बस्दा अनेक गरेर, ऋण सापट खोजेर मैले बेलाबेलामा राहत दिएँ । सरकारलाई मैले पटक–पटक यी घाइते अपाङ्गको उपचार हुनुर्पयो भनें । पहिला खाईपाई आएको मासिक भत्ता पनि खोसिदिएछ यो सरकारले त झन् ।’
उनले कटाक्ष गर्दै भने– फट्याइँ गर्न पनि कति सकेको क्या । जालझेल गर्न पनि कस्तो दिमाग हो !’ विशेष गरी जनयुद्धका योद्धाहरुलाई प्रचण्डले बेवास्ता गरेको केपी ओलीले आरोप लगाउँदै आएका थिए, यसैको जवाफमा प्रचण्डले ओलीलाई ‘फटाहा’ को संज्ञा दिएका हुन् ।
तर, अहिले प्रचण्डले घाइते योद्धाहरुलाई नहेरेको भन्दै ओलीले फट्याइँ गरेको प्रचण्डको आरोप छ । उनले ओलीमाथि कटाक्ष गर्दै भने, ‘अहिले पार्टी विभाजन गरेपछि र आफू अल्पमतमा परेपछि मैले कहिलेकाहीँ सुन्छु, यी घाइते अपाङ्गलाई हेर्नुपर्दैन ? भन्ने यही केपी ओली । फट्याइँ गर्न पनि कति सकेको क्या ! जालझेल गर्न पनि कस्तो दिमाग हो ?’